Qvar बनाम फ्लोभन्ट: भिन्नता, समानताहरू, र जुन तपाईंको लागि राम्रो छ - औषधि बनाम मित्र | सेप्टेम्बर 2021
चेकआउट कम्पनी, स्वास्थ्य शिक्षा घरपालुवा जनावर प्रेस भारी खेल समुदाय, कम्पनी समुदाय कम्पनी स्वास्थ्य शिक्षा, समाचार स्वास्थ्य शिक्षा औषधि जानकारी, स्वास्थ्य शिक्षा समुदाय, कल्याण औषधि बनाम मित्र स्वास्थ्य स्वास्थ्य शिक्षा, घरपालुवा जनावर
मुख्य >> औषधि बनाम मित्र >> Qvar बनाम फ्लोभन्ट: भिन्नता, समानताहरू, र जुन तपाईंको लागि राम्रो छ
Qvar र फ्लोभेन्ट ब्रान्ड नामका दवाई हुन् जुन दमको लक्षणहरू नियन्त्रण र रोक्नको लागि प्रयोग गरिन्छ। तिनीहरू मर्मतसम्भार, वा नियन्त्रक, औषधि मानिन्छन् जसले दमको समस्याले श्वास, घरघराहट, र खोकला जस्ता लक्षणहरूलाई रोक्न मद्दत गर्दछ। Qvar र फ्लोभन्ट केवल एक पर्चेको साथ खरीद गर्न सकिन्छ।
Qvar र फ्लोभेट inhaled corticosteroids भनिने औषधीहरूको वर्गसँग सम्बन्धित छ। तिनीहरू फोक्सो र वायुमार्गमा सूजन नियन्त्रण र कम गरेर कार्य गर्दछन्। वायुमार्गमा सूजन कम गर्नाले, साँस ल्याएको कोर्टिकोस्टेरोइडले दमको समस्या हुने कसैलाई सास फेर्न सजिलो बनाउन सक्छ। Qvar र फ्लोभन्ट इनहेलरहरू उद्धार गर्दैनन् र दमको आक्रमणको लागि प्रयोग गरिनु हुँदैन। Qvar र फ्लोभेन्ट बीचको भिन्नताहरूको बारेमा अधिक जान्नको लागि पढ्नुहोस्।
बीमा बिना भौतिक प्राप्त गर्न सस्तो ठाउँ
Qvar र फ्लोभन्ट बीचको मुख्य भिन्नता के हो?
यद्यपि तिनीहरूको समान प्रयोगहरू छन्, Qvar र फ्लोभेन्टमा फरक सक्रिय सामग्रीहरू छन्। Qvar ले corticosteroid Beclomethasone समावेश गर्दछ जबकि फ्लोभन्टमा corticosteroid fluticasone हुन्छ।
दुबै क्वार र फ्लोभेन्ट समान प्रकारको फर्म्युलेसनमा उपलब्ध छन्; तिनीहरू दुबै ईन्हेलेसन एरोसोल युक्त मीटर-डोज इनहेलरको रूपमा आउँदछन्। यद्यपि फ्लोभन्ट डिस्कस, वा सुख्खा पाउडर इनहेलरको रूपमा पनि उपलब्ध छ।
Qvar Redihaler प्रति कार्य 80० वा m० mcg को शक्तिमा आउँछ। फ्लोभन्ट एचएफए इनहेलर actuation, ११०, वा २२० एमसीजी प्रति एक्ट्युएसनको बलमा उपलब्ध छ र फ्लोभन्ट डिस्कस strengths०, १००, वा २ m० एमसीजी प्रति फोइल छालामा उपलब्ध हुन्छ।
Qvar र फ्लोभेन्ट बीच मुख्य भिन्नता
औषधि वर्ग Inhaled corticosteroid (ICS) Inhaled corticosteroid (ICS)
ब्रान्ड / जेनेरिक स्थिति कुनै जेनेरिक संस्करण उपलब्ध छैन कुनै जेनेरिक संस्करण उपलब्ध छैन
जेनेरिक नाम के हो? Beclomethasone Dipropionate Fluticasone propionate
कुन फार्म (हरू) ड्रग भित्र आउँछ? इनहेलेसन एरोसोल (मीटर-डोज इनहेलर) इनहेलेसन एरोसोल (मीटर-डोज इनहेलर)
इनहेलेसन पाउडर (डिस्कस)
मानक खुराक के हो? १२ बर्ष र बढि उमेरका बिरामीहरूमा दमको उपचार: M० एमसीजी वा m० एमसीजी दैनिक दुई पटक
Years बर्ष देखि ११ बर्ष उमेरका बिरामीहरूमा दमको उपचार: M० एमसीजी, m० एमसीजी, १ 160० एमसीजी, वा 20२० एमसीजी दैनिक दुई पटक फ्लोभन्ट एचएफए
Years बर्ष र अधिक उमेरका बिरामीहरूमा दमको उपचार: M 88 एमसीजी दैनिक दुई पटक
१२ बर्ष उमेरका बिरामीहरूमा दमको उपचार: १०० एमसीजी दैनिक दुई पटक
To देखि ११ बर्ष उमेरका बिरामीहरूमा दमको उपचार: M० एमसीजी दैनिक दुई पटक
कसले औषधी प्रयोग गर्दछ? वयस्क र years बर्ष र माथिका बच्चाहरु वयस्क र years बर्ष र माथिका बच्चाहरु
सर्भिस Qvar र फ्लोभेन्ट द्वारा उपचार
Qvar र फ्लोभेन्ट वयस्क र बाल रोगी जो4बर्ष र माथिका छन् मा दमको मर्मत उपचारको रूपमा अनुमोदित छन्। रखरखाव उपचारको रूपमा, Qvar र फ्लोभन्ट दम लक्षणहरू नियन्त्रण र रोक्न प्रयोग गर्न सकिन्छ। दुबै Qvar र फ्लोभन्ट पनि एक लाई रोक्न मद्दत गर्न सक्छ दम आक्रमण , वा दम बढ्ने।
Qvar र फ्लोभेन्ट दमको लक्षणहरू नियन्त्रण गर्न दैनिक लिनुपर्दछ। अधिकतम प्रभावकारितामा पुग्न सासको कोर्टिकोस्टेरोइडलाई दुई हप्ता लाग्न सक्दछ। नेशनल इन्स्टिच्युट अफ हेल्थ (NIH) का अनुसार हल्का वा मध्यम निरन्तर दम भएका केहि व्यक्तिले Qvar वा फ्लोभन्ट लिन सक्दछन्। बीच-बीचमा, वा आवश्यकता अनुसार ।
Qvar र फ्लोभन्ट बचाव इनहेलरहरूको रूपमा प्रयोग गर्नु हुँदैन। क्वार र फ्लोभन्ट जस्ता इनहेल्ड कोर्टिकोस्टेरोइडहरू सामान्यतया अल्बटेरोल जस्ता एक उद्धार इनहेलरको साथ दमको हमलाबाट राहत दिन सल्लाह दिइन्छ।
सर्त Qvar फ्लोभन्ट
दम हो हो
के Qvar वा फ्लोभन्ट अधिक प्रभावी छ?
दुबै Qvar र फ्लोभन्ट दम्य व्यवस्थापनको लागि प्रभावकारी औषधी हो। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कारक जसले कि किवार वा फ्लोभन्टको प्रभावकारिता निर्धारण गर्दछ कति पटक तिनीहरू प्रयोग गरिन्छ। ईन्हेल्ड कोर्टिकोस्टेरोइडहरू प्रभावकारी हुनको लागि नियमित रूपमा प्रयोग गर्नुपर्दछ। अन्यथा, दमको व्यक्तिले बढ्दो दमको लक्षण वा दमको हमला अनुभव गर्न सक्छ जुन अस्पतालमा भर्ना हुन सक्छ।
एक यादृच्छिक, डबल-ब्लाइन्ड क्लिनिकल परीक्षण सिधा तुलनात्मक रूपमा दमको साथ लगभग patients०० बिरामीहरूमा बेक्लोमेथासोन डाइप्रोपियनेट र फ्लुटिकासोन प्रोपियोनेट तुलना गर्दछ। ट्रायलको अन्त्य सम्ममा, फ्लोटिकासोन प्रोपियोनेटको प्रयोगको परिणाम भयो उल्लेख्य रूपमा राम्रो सुधारहरू फेफड़ोंको प्रकार्य र बेक्लोमेथासोन डाइप्रोपियनेटको तुलनामा दम लक्षणहरू कम भयो। दुबै औषधिहरूको समान सुरक्षा प्रोफाइल रहेको भेटियो।
एउटा मेटा-विश्लेषणले पत्ता लगायो कि इनहेल्ड कोर्टिकोस्टेरोइडहरू छन् सामान्यतया प्रभावकारी दमको उपचारको लागि कम वा मध्यम खुराकमा। उच्च-खुराक कोर्टीकोस्टेरोइड्सले कुनै अतिरिक्त क्लिनिकल लाभ प्रदान गर्दैन र प्रतिकूल प्रभावहरूको बढ्दो जोखिम लिन सक्छ।
उत्तम अस्थमा उपचारको लागि स्वास्थ्य सेवा प्रदायकसँग परामर्श गर्नुहोस् जुन तपाईंको लागि काम गर्दछ। यदि अस्थमाका लक्षणहरू एक्लो कोर्टिकोस्टेरॉइडको साथ सुधार गर्दैन भने, स्वास्थ्य सेवा प्रदायकले लामो समय अभिनय गर्ने ब्रोन्कोडाइलेटर कर्टिकोस्टेरोइडसँग मिल्काउन सल्लाह दिन सक्छ। संयोजन इनहेलर्सले एडवायर (फ्लुटिकासोन / सालमेटरोल), डुलेरा (मोमेटासोन / फार्मोटेरोल), र सिम्बिकोर्ट (बुडेसोनाइड / फॉर्मोटेरोल) समावेश गर्दछ।
कभरेज र फ्लोभन्टको कभरेज र लागत तुलना
Qvar जेनेरिक औषधिको रूपमा उपलब्ध छैन। त्यसकारण, यसको औसत retail retail4 डलरको खुदरा मूल्यको साथ महँगो हुन सक्छ। केहि मेडिकेयर र बीमा योजनाहरु Qvar को लागत को कभर गर्न सक्छ। एकलकेयरबाट छुट कार्ड प्रयोग गरेर क्वारको लागत लगभग $ २१० सम्म कम हुन सक्छ।
Qvar जस्तै, फ्लोभन्ट केवल ब्रान्ड-नाम सूत्रहरूमा उपलब्ध छ। जे होस्, फ्लोभेन्ट Qvar को लागी सस्तो विकल्प हुन सक्छ। धेरै मेडिकेयर र बीमा योजनाहरु एक फ्लोभन्ट पर्चेको कवर गर्नेछ। बीमा बिना, फ्लोभन्ट एचएफएको औसत नगद मूल्य $7is7 र फ्लोभन्ट डिस्कसको औसत नगद मूल्य around २ around around जति छ। एकलकेयरबाट बचत कार्ड प्रयोग गर्दा फ्लोभन्ट एचएफए वा फ्लोभन्ट डिस्कस इनहेलरको लागत $ २१7 र $ १66 मा कम गर्न मद्दत गर्दछ।
मात्रा १ इनहेलर १ इनहेलर
विशिष्ट मेडिकेयर कोपे $ 24– $ 293 । 3– $ 297
एकलकेयर लागत 8 २०8 +7२१7 +
Qvar बनाम फ्लोभन्टको साझा साइड इफेक्टहरू
Qvar र फ्लोभन्टले समान साइड इफेक्ट साझा गर्छन्। Corticosteroids को रूप मा इनहेलेटेड यी औषधिहरूले माथिल्लो श्वासप्रणालीको संक्रमण, नासोफ्यारेन्जाइटिस, राइनाइटिस, र साइनोसिटिस जस्ता साइड इफेक्ट हुन सक्छ। दुबै औषधीहरूले पनि अन्य साइड इफेक्टको बीचमा टाउको दुखाइ, खोकी र मतली हुन सक्छ।
एक शारीरिक परीक्षा लागत कति छ?
Qvar वा फ्लोभन्टले मौखिक थाल्स, वा मुखमा फ .्गल संक्रमणको जोखिम बढाउन सक्छ। क्वार वा फ्लोभन्ट जस्ता इनहेल कोर्टिकोस्टेरोइड प्रयोग गरे पछि निगल बिना मुखलाई पानीले पखाल्नु पर्छ। एक स्पेसर भनिने उपकरण फ्लोभन्ट HFA इनहेलरको साथ मौखिक थ्रसको जोखिम कम गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ।
इनहेल्ड कोर्टिकोस्टेरोइडको गम्भीर साइड इफेक्टहरूमा विरोधाभासी ब्रोन्कोस्पाज्म र अतिसंवेदनशीलता प्रतिक्रियाहरू सामेल छन्। विरोधाभासपूर्ण ब्रोन्कोस्पाज्म इनहेल्ड कोर्टिकोस्टेरॉइड प्रयोग गरेपछि तुरून्त देखा पर्न सक्छ र गम्भीर घरघराहट र सास फेर्न जस्तै लक्षणहरू समावेश गर्दछ। गम्भीर दाग, सूजन, र सास फेर्न समस्या जस्ता अतिसंवेदनशीलता प्रतिक्रियाहरू यी औषधीहरूमा कुनै पनि सामग्रीसँग एलर्जी हुनेहरूमा संभव छ। यदि तपाईले ब्रोन्कोस्पाज्म वा अतिसंवेदनशीलता प्रतिक्रियाहरूको लक्षण र लक्षणहरू अनुभव गर्नुभयो भने तत्काल मेडिकल ध्यान खोज्नुहोस्।
ओरल थ्रश हो ≥≥% हो >%%
माथिल्लो श्वसन पथ संक्रमण हो ≥≥% हो >%%
नासोफ्यारेन्जाइटिस हो ≥≥% हो >%%
नासिकाशोथ हो ≥≥% हो >%%
साइनसाइटिस हो ≥≥% हो >%%
टाउको दुखाई हो ≥≥% हो >%%
कफ हो ≥≥% हो >%%
मतली हो ≥≥% हो >%%
स्रोत: डेलीमेड ( Qvar ), डेलीमेड ( फ्लोभन्ट )
Qvar बनाम फ्लोभन्टको ड्रग अन्तर्क्रिया
CvP3A4 अवरोधकर्ताको रूपमा काम गर्ने औषधीहरू लिँदा क्वार र फ्लोभन्ट जस्ता इनहेल्ड कोर्टिकोस्टेरोइडहरू त्याग्न वा अनुगमन गरिनु पर्छ। यी औषधी सेवन गर्दा कोर्टिकोस्टेरोइड्सको रगतको मात्रा बढ्न सक्छ जसले साइड इफेक्टको जोखिम बढाउन सक्छ। CYP3A4 अवरोधका उदाहरणहरूमा रीटोनाभिर, केटोकोनाजोल, र क्लेरिथ्रोमाइसिन सामिल छन्।
Corticosteroids प्रतिरोध वा अनुगमन गरिनु पर्छ इम्युनोप्रप्रेसन्ट ड्रग्स लिँदा। इम्युनोसप्रप्रेसन्ट ड्रग्सले प्रतिरक्षा प्रणालीलाई कमजोर बनाउन सक्छ र व्यक्ति संक्रमणको लागि अधिक संवेदनशील हुन सक्छ, विशेष गरी यदि तिनीहरूले कोर्टिकोस्टेरोइड पनि लिइरहेका छन्। इम्युनोप्रप्रेसन्ट ड्रग्समा एजाथिओप्रिन र साइक्लोस्पोरिन पर्छ। किनभने तिनीहरू रक्तप्रवाहमा न्यूनतम अवशोषित हुन्छन्, इनहेल्ड कोर्टिकोस्टेरोइड्सले अन्य औषधीहरूसँग मौखिक कोर्टिकोस्टेरोइड्ससँग कुराकानी गर्न सक्दैन।
औषधि ड्रग क्लास Qvar फ्लोभन्ट
सकिनविर CYP3A4 अवरोधकर्ताहरू हो हो
मेथोट्रेक्सेट इम्युनोसप्रेसन्ट्स हो हो
Qvar र फ्लोभन्ट को चेतावनी
इनहेल्ड कोर्टिकोस्टेरोइड्सले हड्डीको खनिज घनत्वमा कमी ल्याउन सक्छ, विशेष गरी दीर्घकालीन प्रयोगको बेला। अस्टियोपोरोसिस बिरामी वा अस्टियोपोरोसिसको बढेको जोखिमले कोर्टिकोस्टेरोइड त्याग्नु पर्छ वा उपचार भरि निगरानी गर्नुपर्छ।
इनहेल्ड कोर्टिकोस्टेरोइड्सले प्रतिरक्षा प्रणालीलाई दबाउन सक्छ र संक्रमणको जोखिम बढाउन सक्छ, विशेष गरी जब लामो समयसम्म उच्च खुराकमा प्रयोग गरिन्छ। संक्रमण जोखिममा परेका बिरामीहरूले ईन्हेल्ड कोर्टिकोस्टेरोइड त्याग्नु पर्छ वा उपचार भरि निगरानी गर्नुपर्छ।
इनहेल्ड कोर्टिकोस्टेरोइड्सको जोखिम बढ्न सक्छ मोतिबिन्दु र मोतियाबिन्दु। क्ववार वा फ्लोभन्ट जस्ता इनहेल्ड कोर्टिकोस्टेरोइड प्रयोग गर्दा बढेको इन्ट्राअक्युलर दबाव वा धमिलो दर्शनको इतिहास भएका बिरामीहरूको निगरानी गरिनु पर्छ।
ईन्हेल्ड कोर्टिकोस्टेरोइड प्रयोग गर्नु अघि अन्य सम्भावित चेतावनी र सावधानीहरूको बारेमा स्वास्थ्य सेवा प्रदायकसँग कुरा गर्नुहोस्।
क्वार बनाम फ्लोभन्टको बारेमा प्राय: सोधिने प्रश्नहरू
क्वार के हो?
Qvar दमको लक्षणहरू नियन्त्रण र रोक्नको लागि प्रयोग गरिएको इनहेल कोर्टिकोस्टेरोइड औषधि हो। यो एक मीटर-डोज इनहेलरमा इनहेलेसन एरोसोलको रूपमा उपलब्ध छ। Qvar Teva फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित छ। Qvar ले Beclomethasone समावेश गर्दछ र दमको उपचार गर्न दैनिक दुई पटक लिइन्छ।
फ्लोभन्ट भनेको के हो?
फ्लोभन्ट दमका लक्षणहरू ब्यवस्थित गर्न र रोक्नको लागि प्रयोग गरिएको इनहेल कोर्टिकोस्टेरोइड औषधि हो। यो इनहेलेसन एरोसोल वा इनहेलेसन पाउडरको रूपमा उपलब्ध छ। फ्लोभन्ट ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन द्वारा निर्मित हो। यसले फ्लुटिकासोन समावेश गर्दछ र दमको उपचार गर्न दैनिक रूपमा दुई पटक लिइन्छ।
के क्वार र फ्लोभन्ट एकै हो?
Qvar र फ्लोभेन्ट दुबै एक corticosteroid, तर तिनीहरू एक समान छैन। Qvar ले Beclomethasone र फ्लोभेन्ट fluticasone समावेश गर्दछ। Qvar र फ्लोभन्ट पनि फरक प्रकारको आउँछ; Qvar इनहेलेसन एरोसोलको रूपमा उपलब्ध छ जबकि फ्लोभन्ट इनहेलेसन एरोसोल र इनहेलेसन पाउडरको रूपमा उपलब्ध छ।
के Qvar वा फ्लोभन्ट राम्रो छ?
Qvar र फ्लोभेन्ट दुबै दम नियन्त्रणको लागि प्रभावकारी औषधी हो। केहि अध्ययन सुझाव दिनुहोस कि फ्लोभेन्ट Qvar भन्दा कम डोजमा बढी प्रभावकारी छ। यद्यपि दुबै औषधिहरूको समान साइड इफेक्टहरू छन्। सबैभन्दा प्रभावकारी इनहेल कोर्टिकोस्टेरोइड एक हो जुन दमका लक्षणहरू नियन्त्रण गर्न र रोक्नको लागि नियमित रूपमा प्रयोग गरिन्छ। तपाईको लागि उत्तम दमा औषधीको लागि स्वास्थ्य सेवा प्रदायकसँग परामर्श लिनुहोस्।
के म गर्भवती हुँदा क्वार वा फ्लोभन्ट प्रयोग गर्न सक्छु?
Qvar वा फ्लोभन्ट पूर्ण रूपमा सुरक्षित वा गर्भावस्थामा हानिकारक छ भनेर देखाउनको लागि त्यहाँ पर्याप्त डाटा छैन। यद्यपि, किनभने इनहेल कोर्टिकोस्टेरोइड्सको रक्तप्रवाहमा सीमित शोषण हुन्छ, तिनीहरूलाई सामान्यतया गर्भावस्थामा सुरक्षित मानिन्छ। गर्भवती हुँदा उत्तम दमा उपचार विकल्पहरूको लागि स्वास्थ्य सेवा प्रदायकसँग परामर्श लिनुहोस्।
म क्वार वा फ्लोभटलाई रक्सीको साथ प्रयोग गर्न सक्छु?
कुनै रक्सी र Qvar वा फ्लोभन्ट संग ड्रग अन्तर्क्रिया छैन। यद्यपि रक्सीको सेवन एक भएको बताइएको छ दम लक्षणहरूको लागि ट्रिगर केही व्यक्तिहरूमा। स्वास्थ्य सेवा प्रदायकसँग कुरा गर्नुहोस् कि यो कभार वा फ्लोभेट जस्ता इनहेल्ड कोर्टिकोस्टेरोइड लिदा रक्सी पिउनु सुरक्षित हुन्छ कि हुँदैन।
tamiflu पछि इन्फ्लुएन्जा संक्रामक कति लामो छ
Qvar कुन प्रकारको इनहेलर हो?
Qvar दमको लागि मर्मटेन इनहेलर हो जसमा एक कोर्टिकोस्टेरोइड भनिन्छ जसलाई बेक्लोमेथासोन भनिन्छ। अधिकतम प्रभावकारिताका लागि यो दैनिक आधारमा लगातार प्रयोग गर्नुपर्दछ। एक साँस कोर्टिकोस्टेरोइड को रूप मा, Qvar उपचार शुरू पछि एक देखि दुई हप्ता सम्म सबैभन्दा लाभ प्रदान गर्न सुरु गर्न सक्दैन।
दमको लागि उत्तम स्टेरोइड ईन्हेलर के हो?
उत्तम स्टेरोइड ईन्हेलर एक हो जुन तपाईं नियमित रूपमा दम लक्षणहरू रोक्न र नियन्त्रण गर्न प्रयोग गर्नुहुन्छ। इन्हेलेटेड कोर्टिकोस्टेरोइड्समा एल्वेस्को (सेक्लोसोनाइड), क्वार (बेक्लोमेथासोन), फ्लोभन्ट (फ्लूटिकासोन), पल्मीकोर्ट (बुडेसोनाइड), र एस्नेक्स (मोमेटासोन) समावेश छ। औषधि को प्रभावकारिता को सूत्र र खुराक मा निर्भर गर्दछ। अन्य कारकहरू जस्तै साइड इफेक्ट र लागत पनि दमको लागि उत्तम स्टेरोइड इनहेलर छनौट गर्दा ध्यानमा राख्नु पर्छ। एक स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संग कुरा गर्नुहोस् तपाईको लागि उत्तम स्टेरोइड इनहेलर निर्धारण गर्न।
के Qvar ले तपाईंको प्रतिरक्षा प्रणालीलाई असर गर्छ?
Qvar मा एक corticosteroid हुन्छ Beclomethasone, जो दमन गर्न, वा कमजोर गर्न सक्छ, प्रतिरक्षा प्रणाली। अन्य कोर्टिकोस्टेरोइड्स जस्तै, क्वार पनि सावधानीका साथ प्रयोग गर्नुपर्दछ वा इम्युनोकोम्प्रोमाइज्ड वा हाल इम्युनोसप्रप्रेसन्ट लिने बिरामीहरूमा सावधानी अपनाउनु पर्दछ। कोर्टिकोस्टेरोइड लिने बित्तिकै बिरामी संक्रमणको खतरा बढ्न सक्छ। क्षयरोग, फgal्गल, ब्याक्टेरिया, भाइरल, वा परजीवी संक्रमणको ईतिहासको साथ सावधानीका साथ कोर्टिकोस्टेरोइडहरू प्रयोग गर्न सिफारिस गर्न सकिन्छ।
EpiPen प्रयोगको बारेमा तपाईलाई जान्नु पर्ने सबै कुरा
शीर्ष5सर्वश्रेष्ठ महिला कसरत दस्ताने
रक्त शर्करा को स्तर २०० खतरनाक छ
कसरी कम गर्न को लागी रक्तचाप घरेलु उपचार
कति समय सम्म तपाइँ योजना बी गोली लिन सक्नुहुन्छ
तपाइँ tylenol र aleve सँगै webmd लिन सक्नुहुन्छ
कसरी घर मा एक मूत्र पथ संक्रमण को उपचार गर्न को लागी
कसरी तपाइँको डाक्टर भियाग्रा को लागी लेख्न को लागी